Soo dejisan Adobe Reader 15.3.1 – Android – Vessoft
Soo dejisan Adobe Reader
Adobe Reader – software caan ah in la PDF files shaqeeyaan. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah tafatirka, isagoo intaa ku daray of comments, la qabsiga, search by qoraalka, rakibidda of Bookmarks iyo shaqo la waraaqaha oo ka difaaca sirta ah. Adobe Reader u saamaxaaya in ay waafajiyaan Goosimo qoraalka iyo si toos ah u beddeli font size in ay ballaarinta ee shaashadda. Software ayaa sidoo kale macaamila adeegyada daruur of Acrobat in u saamaxaaya in ay soo bixi PDF files in qalab kale ama kombiyuutarada iyo sii wado si aad u eegto dukumentiyada ku meel of jarida.
Daawashada iyo is-dhaafsiga ee PDF files
Dhexgalka adeegyada daruur of Acrobat
Adobe Reader Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Beach Buggy Racing 1.2.11